GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French Ga Georgian German German Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malay Malayalam Maltese Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Nepali New Zealand Sign Language Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Taiwanese Sign Language Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
1 Nke a bụ okwu Jehova nke ruru Maịka+ onye Moreshet ntị, nke a gwara ya n’ọhụụ banyere Sameria+ na Jeruselem+ n’oge ọchịchị Jotam,+ Ehaz,+ Hezekaya,+ bụ́ ndị eze Juda:+ 2 “Geenụ ntị, ndị dị iche iche, unu niile; ṅaa ntị, gị ụwa na ihe jupụtara n’ime gị,+ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova bụrụ onye akaebe megide unu,+ ka Jehova si n’ụlọ ya dị nsọ gbagide unu akaebe.+ 3 N’ihi na, lee! Jehova si n’ebe obibi ya na-apụta,+ ọ ga-agbadatakwa wee zọda ebe niile dị elu nke ụwa.+ 4 Ugwu niile ga-agbaze n’okpuru ụkwụ ya,+ ndagwurugwu niile ga-agbawasị, dị ka mgbá aṅụ nke ọkụ gbazere,+ dị ka mmiri a wụpụrụ n’ebe kpọdara akpọda. 5 “Ọ bụ nnupụisi Jekọb mere ihe a niile ji na-eme, ọbụna n’ihi mmehie nke ụlọ Izrel.+ Gịnị bụ nnupụisi Jekọb? Ọ́ bụghị Sameria?+ Gịnịkwa bụ ebe ndị dị elu nke Juda?+ Ọ̀ bụ na ha abụghị Jeruselem? 6 M ga-emekwa ka Sameria bụrụ mkpọmkpọ ebe nke dị n’ọhịa,+ ebe a na-akọ ubi vaịn; m ga-awụbakwa nkume ya na ndagwurugwu, m ga-agbakwa ntọala ya ọtọ.+ 7 A ga-akụrikwa ihe oyiyi ya a pịrị apị,+ kpọọkwa onyinye niile e ji kwụọ ya ụgwọ ọkụ;+ m ga-ebibikwa arụsị ya niile. N’ihi na o si n’ihe ọ gbatara n’akwụna nweta ha, ọ bụkwa n’ihe a gbatara n’akwụna ka ha ga-alaghachi.”+ 8 N’ihi nke a, m ga-akwa ákwá arịrị, tiekwa mkpu ákwá;+ m ga-agba ụkwụ efu, gbarakwa ọtọ na-ejegharị.+ M ga na-eti mkpu dị ka nkịta ọhịa, na-erukwa uju dị ka nne enyí nnụnụ. 9 N’ihi na ọnyá dị ya n’ahụ́ adịghị ala ala;+ n’ihi na o rutewo Juda,+ ihe otiti ahụ erutewokwa n’ọnụ ụzọ ámá nke ndị m, ruo Jeruselem.+ 10 “Unu akọla ya na Gat; unu akwala ákwá ma ọlị.+ “Tụrụọnụ n’ájá n’ụlọ Afra.+ 11 Gị nwaanyị nke bi na Shefia, gbara ọtọ, jirikwa ihere si n’ala gị pụọ.+ Nwaanyị nke bi na Zeanan apụbeghị. Iti mkpu arịrị nke Bet-izel ga-anara unu ebe ọ ga-eguzo. 12 N’ihi na nwaanyị nke bi na Merọt echerewo ka o nweta ihe ọma,+ ma ihe ọjọọ esiwo n’ebe Jehova nọ bịakwasị ọnụ ụzọ ámá Jeruselem.+ 13 Kegide ìgwè ịnyịnya n’ụgbọ, gị nwaanyị nke bi na Lekish.+ Ọ bụụrụ ada bụ́ Zayọn mmalite mmehie,+ n’ihi na ọ bụ n’ime gị ka a hụrụ nnupụisi Izrel.+ 14 Ị ga-enye Moreshet-gat onyinye ọ ga-eji lawa.+ Ụlọ niile dị n’Akzib bụụrụ ndị eze Izrel ihe aghụghọ. 15 M ga-ezitere gị onye ga-anapụ gị ihe onwunwe gị,+ gị nwaanyị nke bi na Marisha.+ Ebube Izrel ga-eru Adọlam.+ 16 Mee onwe gị isi nkwọcha, kpụchapụ ntutu gị n’ihi ụmụ gị ndị na-eme gị obi ụtọ nke ukwuu.+ Mee ka isi nkwọcha gị sakwuo mbara dị ka nke udele,* n’ihi na e siwo n’ebe ị nọ dọrọ ha n’agha.”+
^ Okwu Hibru a nwekwara ike ịpụta ugo.